Taariikhda My Butros » Sidee Si dhunkada Aayad Via Burji
by Nic Gaudette
Sidee Si dhunkada Aayad Via Burji
Last updated: Sep. 24 2020 | 3 min akhri
Dhunkasho ugu horeeya ee aad ka qabto qof waa mid ka mid ah daqiiqado kama dambaysta ah ee xiriirka ka gaysashada, iyo wax ka laba idinka mid had iyo jeer la xasuusto. Haddii aad haysato dhunkasho ugu horeysay xun, waxaa sida caadiga ah maaha wax uu ka soo kabsaday in. Akhri si aad u aragto sida ay tahay in aad dhunkato taariikhda markii ugu horeysay:
Marka ugu horraysa ee aad dhunkato Aries ah, aad inta badan ma yeeshaan wax laga walwalo socda si dhakhso ah ama sugaya joogo waqtiga saxda ah. Haddii aad doonayso inaad ku dhunkado, waxaa samayn aan libiqsanayn. Waxay u bogayaan aad u xaaraysaa qabsashada la joogo iyo in si toos ah. U kulul iyo dareen. In kastoo aad ogtahay waa in, ay u badan tahay in aad marka hore dhunkado doonaa.
Marka ugu horraysa ee aad dhunkato Taurus ah, aad rabto inaad sugto. Ha si deg-, iyo wax ma aadan dhunkashada kulul oo degdeg ah. Calaamaddan jecel yahay gubashada la'ahay, sidaas darteed waxa la soo dhaafay. Ma qaadan doonaa majaraha, si aad u baahan doontaa in aad. Stroke ama dhunkado ay qoorta ka hor inta aadan bushimahooda ayay dhunkado in ay si dhab ah u hesho iyagoo tegaya.
Marka ugu horraysa ee aad dhunkato Gemini ah, u sheeg inaad doonayso inaad marka hore dhunkado. Calaamaddan ay jawaab u tahay erayo ka khayr badan oo kale oo kasta. Waxaana Waswaasiyey seductively in dhegahoodu, markaas qayilaana waxa ku. Hubka ay raadkiisa ama qabasho ay gacanta (labada garoomada by Gemini). Geminis Qaar ugu horeysay ka faa'iideysato fursad doonaa, laakiin caadi ahaan waxay tahay rumowday dhan iyo ka faa'iideysato fursad ma, si aanad qun.
Marka ugu horraysa ee aad dhunkato Cancer a, Waa inaad ogaato waxay tahay dhaqanka iyo jeclahay raaxo leh ku hareeraysan, sidaa daraadeed waxa uu sameyn doono dhamaadka ah ee taariikhda soo dhowdahay. Marka aad iyaga dhunkado, oo iyaga ku hay gacmahaaga si ay u dareemaan ammaan iyo nabad. Ha ha muddo sii socdaan, oo ha isku haleeyo.
Marka ugu horraysa ee aad dhunkato Leo ah, u samaysaa sida la yaab leh sida aad awooddo. Aayad waxay rabtaa in ay noloshaada ahaato sida filim, wayna ceeboobi doonaan wax caadiga ah iyo caajis. Iyaga dhunkada hoos madow, in kaluu ku yidhaahdaa roobka, ama dhexe ee wadada. U sabarka iyo sawir.
Marka ugu horraysa ee aad dhunkato Virgo ah, hubiyo neefta ka hor. Haddii aad u tageen inay casho, musqusha ku dhuftay ka hor inta uusan si loo hubiyo in aan waxba ku xayiran waxaa ku jira ilkaha oo aad arbushin karo, reexaanta ah ama isticmaal luqluqasho. Wax iyaga u noqon doonaa in ka badan dhunkashada afka wasakh ah. Layliska farsamo wanaagsan sababtoo ah waxay ogaan alaabtoodii.
3 Great Talooyin Si Abuuridda The Best Online Profile Dating
Sidee si ay u fududayso u Xanuun of weyni ka a
Top Five Online Talooyin Safety Dating
Waxa aad si fiican u ogaado: Chivalry waa King